Inona avy ireo Vitam-pejy Core an'ny Google sy ireo tranga iainan'ny pejy? | Martech Zone
Google dia nanambara fa ny Core Web Vitals dia ho lasa laharana voalohany amin'ny Jona 2021 ary ny famoahana dia kasaina hatao amin'ny volana Aogositra. Ireo olona ao amin'ny WebsiteBuilderExpert dia nametraka ity sary feno ity izay miresaka amin'ny Google tsirairay Vitaly Core Web (CWV) ary Traikefa amin'ny pejy Antony, ny fandrefesana azy ireo, ary ny fomba fanatsarana ireo fanavaozana ireo.
Inona avy ireo Vitals Google Web Core?
Ny mpitsidika ny tranonkalanao dia maniry tranonkala manana traikefa pejy mahafinaritra. Tao anatin'izay taona faramparany izay, Google dia nampiditra isan-karazany ireo mason-tsivana iainan'ireo mpampiasa ho anton'ny valin'ny laharana. Miantso ireo i Google Vitaly Core Web, andiam-pandrefesana mifandraika amin'ny hafainganam-pandeha, ny fandraisana andraikitra ary ny fitoniana hita maso, hanampiana ireo tompona tranokala handrefy ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny tranonkala.
Vitaly Core Web dia andiana metatra tena izy, mifototra amin'ny mpampiasa izay manisa ny lafiny lehibe amin'ny traikefan'ny mpampiasa. Izy ireo dia mandrefy ny refin'ny fampiasana Internet toy ny fotoana fandefasana, ny fifandraisana, ary ny fahamarinan'ny atiny rehefa mavesatra (noho izany tsy tampoka tampoka io bokotra io rehefa miova eo ambanin'ny rantsan-tànanao izy - mahasosotra tokoa!).
Core Web Vitals dia mampiditra metrika fohy 3:
Doko feno votoaty lehibe indrindra (LCP): fepetra Loading fampisehoana. Mba hanomezana traikefa tsara an'ny mpampiasa dia tokony hitranga ao anatiny ny LCP 2.5 segondra ny rehefa manomboka mamoaka ny pejy voalohany.
Fanemorana ny fidirana voalohany (FID): fepetra interactivity. Mba hanomezana traikefa tsara an'ny mpampiasa dia tokony hanana FID an'ny pejy 100 milliseconds na kely kokoa.
Cumulative Layout Shift (CLS): fepetra fitoniana hita maso. Mba hanomezana traikefa tsara an'ny mpampiasa, ny pejy dia tokony hitazona CLS an'ny 0.1. na kely kokoa.
Azonao atao ny mahazo tatitra momba ireto metrika ireto izay mampiasa fitaovana Google Insppeed Insights na ny tatitra Core Vitals ao amin'ny Google Search Console
Tatitra momba ny pejy momba ny pejy Google Tatitry ny CWV ao amin'ny Google Search Console
Inona avy ireo anton-javatra niainana ny pejy an'ny Google?
The traikefa pejy refesina ny refy amin'ny lafiny ahitan'ny mpampiasa ny zavatra niainany nifandray tamin'ny pejy web. Ny fanatsarana ireo anton-javatra ireo dia mahatonga ny tranonkala ho finaritra kokoa ho an'ireo mpampiasa manerana ny tranonkala sy ny habaka rehetra ary manampy ny tranokala hivoatra mankamin'ny andrasan'ny mpampiasa amin'ny finday. Mino izahay fa hitondra anjara biriky amin'ny fahombiazan'ny orinasa eo amin'ny tranonkala izany rehefa mihamaro ny mpampiasa ary afaka mivezivezy tsy dia misy dikany.
Inona no fiantraikan'ny SEO Vital Core amin'ny mpanorina tranokala?
Mampiasa sary statistika amin'ny antsipiriany, fikarohana tany am-boalohany, ary torohevitra azo ampiharina, ny sary Inona no fiantraikan'ny SEO Vital Core amin'ny mpanorina tranokala manaparitaka ireo fanavaozana Core Web Vitals vaovao sy fanavaozana ny pejy Experience an'i Google, ny fiantraikan'ny CWV tamin'ny zava-bitan'ny mpanorina tranokala ecommerce fito malaza, ary ny fomba hanatsarana ny tranokala noforonina tamin'ny fampiasana mpanamboatra ho azy ireo.
Ity misy zavatra tafiditra ao amin'ny infographic, (miaraka amina rohy mitsambikina amin'ireo faritra mifandraika amin'ilay torolàlana loharano):
Fikatsoana ny fanavaozana ny vohikala Google Core Web Vitals sy ny fanandramana ny pejy ary ny fomba fiasan'izy ireo
Insight amin'ny fiantraikany amin'ny tranokala mpanangana tranokala sy ny CWV Pro / Cons-ny
Famakafakana WebsiteBuilderExpert Mpanangana tranokala ecommerce 7 - Shopify, Wix, BigCommerce, Squarespace, Shift4Shop, Volusion, Square Online (URL 3000+) - notsapaina tamin'ny CWV, Server Response Times, ary ny Score Performance, manerana ny biraonao sy ny finday
Ahoana no hitsapana? tranokala ho an'ny Core Website Vitals
Torohevitra fanatsarana ho an'ny mpanorina tranokala / tranokala
Ity ny infographic feno, aza hadino ny manindry ny lahatsoratra feno ataon'izy ireo izay manimba ny faritra tsirairay ary koa ny fomba ahafahanao misafidy rafitra fitantanana atiny (CMS) afaka havaozina tanteraka ny fikarohana.
Tags: vitals core webcwvbirao vs findayencryptionfidGooglefahitana googleppeed pejyFikarohana Google Safefamatrarana saryloko feno votoaty lehibe indrindrafinday-sariakatraikefa pejyfanavaozana ny traikefa pejyhevitra momba ny pejysecuritySEOhafainganam-pandehan'ny tranonkalatranonkalaWix